Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Mid kamid ah Dowlada Yurub oo Ogolaatay in dalkeeda laga dhiso Masjid Malaayiin Dollar ku baxeyso
August 22 2017 00:52:41
Mid kamid ah Dowlada Yurub oo Ogolaatay in dalkeeda laga dhiso Masjid Malaayiin Dollar ku baxeyso
Dowlada Gariiga ayaa ogolaatay in dalkeeda laga dhiso Masjid weyn oo dhismihiisa ay ku baxeyso lacag Malaayiin Dollar, si ay masjidkaasi ugu cibaadeestaan Muslimiin badan oo hada heesan masjid.
Baarlamaanka Gariiga oo kulan yeeshay ayaa ugu dambeyn ansixiyay in la dhiso Masjid weyn oo ku baxayaan lacago Malaayiin Dollar ah, waxaana lacagta masjidkan lagu dhisayo bixinaya Dowlada Gariiga.
Masjidkan ayaa laga dhisayaa meel u dhow bartamaha caasimadda Athens, waxaana Masjidkaasi ku cibaadeesan doono tobonaan kun oo kunool magaalada Athens, kuwaa oo hada heesan meelo wanagasan ay ku cibaadeestaan.
Xisbiyo ka jira dalka Gariiga ayaa kasoo horjeeda dhismaha Masjidkan ay Dowlada ku bixineyso lacagta Malaayiinta Dollar ah, waxa ayna sheegeen Xildhibaano iyo Siyaasiyiin xisbiyadasai katirsan in ay ka xun yihiin lacagta umada loo adeegsado dhismaha Masjid xili uu dalkooda dhaqaalo daro ka jiro.
Qaar ka mid ah xisbiyadda midigta fog ayaa dowladda Giriigga ku tilmaamay mid Islaamka ku faafin rabta dalkaasi, waxa ayna muujiyeen sida ay u neceb yihiin ama uga horjeedaan in dalkasi Islaamka ku faafo lagana dhiso Masjidyo.